यस्तो छ बाबुरामलाई उत्साहित बनाउने प्रशान्त सिंहको प्रदेश नं. २ समृद्धिको अवधारणा
जनकपुरधाम, २६ भदौ । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको प्रचार विभागको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका प्रशान्त सिंहले सोमबार जनकपुरमा प्रदेश नं. २ विकास र समृद्धिको २० बुँदे अवधारणा प्रस्तुत गरे ।
जनकपुरमा आयोजित अवधारणा सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उक्त अवधारणा सुनेपछि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले उत्साहित हुँदै फेसबुक स्ट्याटस लेखे । ‘जनकपुरमा नयाँ शक्ति पार्टीद्वारा प्रस्तावित प्रदेश नं २ को विकास र समृद्धिवारे नवीन अवधारणा सार्वजनीकरण,२० वटा मोडेल योजना प्रस्तावित,’ उनले लेखेका छन्, ‘मधेशको राजनीतिमा नितान्त नयाँ आयामको प्रवेशबाट जनतामा व्यापक उत्साह ।’
नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका प्रशान्त सिंहले प्रदेश नं. २ को विकास र समृद्धिका लागि नयाँ शक्ति पार्टीको २० वटा अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्ता छन् सार्वजनिक गरिएका अवधारणाहरु-
उल्लेखित २० वटा विकास र समृद्धिका अवधारणालाई पूरा गर्न हाल प्रदेश नं. २ का लागि सरकारले विजियोजन गरेको बजेटबाहेक थप आवश्यक आर्थिक स्रोत आर्जन गर्न निम्न कार्यहरुहरु गरिनेछ-